विचित्र संसार Archives - Page2of 19 - Nepal News, News from Nepal, Online News from Nepal, Nepali News, Political, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Credit, Vehicle, Bank, Entertainment, Nepali Movie, Songs, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, Nepali Filmi News, Poems, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale
एउटा यस्तो भवन, जो पूरै विश्वमा सबैभन्दा धेरे बदनाम छ । थाहा छैन, तपाइँलाई यसबारेमा जानकारी छ या छैन । यदि छैन भने थाहा पाउनुहुनेछ अब । यो भवन बाहिरबाट जस्तो देखिन्छ, भित्रको दुनियाँ पूरै उल्टो छ । देख्दा त यो भवन अन्य आम भवनहरु जस्तै नै देखिन्छ । हङ्कङकाे फूजी इलाकामा रहेको यो भवन…..
सपनामा महिला देखियो भने के हुन्छ ? जान्नुहोस
गोरी सुन्दर स्त्रीले अंगालो हालेको सपना देखियो भने छिट्टै धनप्राप्ति हुन्छ । सपनामा अप्सराहरूको दर्शन भयो भने अतुल्य धन पाइन्छ ।भिखारीले पनि यस्तो सपना देखेमा मालामाल हुन्छ । सपनामा प्रेमिकासँग घुम्न गएको देखियो भने त्यही प्रेमिकासँग पछि दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन्छ ।सपनामा कुनै महिला देख्नुभयो भने त्यसको विशेष अर्थ लाग्छ । कुनै पुरुषले सपनामा महिलालाई…..
इराकको युवतीहरूको यस्तो छ सुन्दरताको ८ रहस्य
महिलाहरू आफ्नो सुन्दरताको विशेष ख्याल राख्छन् । उनीहरू सुन्दरता र फिगर मेन्टेन राख्नका लागि आफ्नो आहारमा न्यूट्रीएन्ट्सले भरिपूर्ण आहार सेवन गर्न रुचाउँछन् ।यसबाट उनीहरूको त्वचाको चमक बढ्छ । साथै कपालको चम्किलोपन रहिरहन्छ । स्वास्थ्यवर्धक आहारको कारणले इराकको महिलाहरूको वजन पनि नियन्त्रणमा रहन्छ । यसकारण आज हामी यहाँ इराकको महिलाहरू अधिक सुन्दर हुनुको ८ रहस्यमय तथ्यको…..
एउटा ६ वर्षीय बालकले कति आम्दानी गर्छ ? तपाईं भन्नुहोला यस्तो सानो उमेर बच्चा काम गर्छ र ? तर, रायन हरेक हप्ता युट्युवमा खेलौनाको समिक्षा गर्छन् र यसको बदला उनले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । रायनले अघिल्लो वर्ष ११ मिलियन अमेरिकी डलर कमाई गरेका थिए । जनु नेपाली रुपैयाँमा १ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ ।…..
Page2of 1 « Previous 1234… 19 Next »